agile test bvunzo muenzaniso template
Kuru Agile Agile Bvunzo Sarudzo Muenzaniso Template
Agile Bvunzo Sarudzo Muenzaniso Template
Agile Bvunzo Sarudzo
Munzvimbo isingagone, patinoshanda nepfupi sprints kana iterations, yega Sprint ino tarisa pane zvishoma chete zvinoda kana mushandisi nyaya, saka ndezvechisikigo kuti zvinyorwa zvingasave zvakawandisa, maererano neese ari maviri nhamba uye zvemukati.
Chinangwa cheiyo agile bvunzo zano gwaro ndeyekunyora zvakanakisa maitiro uye imwe fomu yechimiro iyo zvikwata zvinogona kutevera. Rangarira, Agile hazvireve kusagadziriswa.
Pano, isu tinotarisa muyenzaniso Agile Bvunzo Sarudzo uye chii chekuisa mugwaro.
Zano rekuyedza kazhinji rine chirevo chemamishinari chinogona kunge chakanangana nezvinangwa zvebhizinesi zvakakura uye zvinangwa.
Chirevo chemamishinari chinogona kunge chiri:
Kugara Uchipa Software Inoshanda iyo Inosangana Nezvinodiwa NeVatengi _by nzira dze _Kupa Kupa Kukurumidza Mhinduro _and _Defect Kudzivirira, pane Kukanganisa Kuonekwa.
Hapana kodhi inogona kunyorerwa nyaya kusvikira isu tatanga kutsanangura maitiro ayo ekugamuchirwa / bvunzo
Nyaya inogona kutarisirwa seyakazara kudzamara kuyedzwa kwese kwekubvuma kwapfuura
Mugwaro reAgile Test Strategic, ini ndaizosanganisira chiyeuchidzo kune wese nezve Quality Assurance
QA seti yezviitiko zvakagadzirirwa kuona kuti zvigadzirwa zvinogutsa zvinodiwa nevatengi nenzira yakarongeka, yakavimbika.
MuSCRUM (agile) QA ibasa remunhu wese, kwete ivo chete vanoedza. QA zvese zviitiko zvatinoita kuti tivimbise hunhu chaihwo panguva yekugadzirwa kwezvigadzirwa zvitsva.
SEI: Kuona kuti kodhi inogadzirwa nemazvo
WHO: Vanokudziridza / technical Architects
RINI? Panongonyorwa kodhi nyowani
Kupi: Yemunharaunda Dev + CI (chikamu chekuvaka)
SEI: Zvoga, Junit, TestNG, PHPUnit
API / Service Kuedzwa
SEI: Kuona kutaurirana pakati pezvinhu zviri kushanda
CHII: Nyowani webhu masevhisi, zvikamu, zvinodzora, nezvimwe
RINI? Kana mangoti API nyowani yagadziriswa uye yagadzirira
SEI: Zvoga, Soap UI, Zororo Mutengi
SEI: Kuchengetedza izvo zvinotarisirwa nevatengi zvasangana
WHO: Dudziro / SDET / Chinyorwa QA
CHII: Kuongorora bvunzo dzekubvuma pane iyo nyaya, kuongorora kweyezvinhu
RINI? Kana ficha yacho yagadzirira uye unit yakaedzwa
Kupi: CI / Yekuedzwa Nzvimbo
SEI: Zvoga (Cucumber)
Kuedzwa kweSystem / Kudzokorodza Kwayedza / UAT
SEI: Kuchengetedza iyo yese system inoshanda kana yakabatanidzwa
WHO: SDET / Chinyorwa QA / Muongorori weBhizinesi / Muridzi wechigadzirwa
CHII: Mamiriro Ekuyedza, Mushandisi inoyerera uye yakajairwa Mushandisi Nzendo, Performance uye chengetedzo kuyedzwa
RINI? Kana Kubvuma Kuedzwa kwapera
Kupi: Stage Nharaunda
SEI: Automated (Webdriver) Yekuongorora Yekuongorora
Chikonzero chakanyanya kukonzeresa kukundikana kwesoftware kuri nekuda kwezvisina kujeka zvinodiwa uye kududzirwa kwakasiyana kwezvinodiwa nenhengo dzakasiyana dzechikwata.
Nyaya dzevashandisi dzinofanirwa kuve dzakareruka, pfupi uye dzisina kujeka. Segwara rakanaka, zvakanakira kutevera INVEST modhi yekunyora nyaya dzevashandisi.
Iyo yakanaka mushandisi nyaya inofanirwa kuve:
Ini ndendendent (yevamwe vese)
N egotiable (kwete chibvumirano chakatarwa chezvinhu)
V inogona (kana vertical )
IS kukurudzira (kune yakanaka fungidziro)
S mall (kuti ikwane mukati meiyo iteration)
T estable (musimboti, kunyangwe kana pasina bvunzo yacho futi)
Iyi fomati inotevera inofanira kushandiswa kunyora nyaya dzevashandisi
Izvo zvakakosha kuti usakanganwe chikamu che 'Kubatsirwa', sezvo munhu wese achifanira kuziva nezvekukosha kwavari kuwedzera nekuvandudza nyaya.
Imwe neimwe yenyaya dzeMushandisi dzinofanirwa kunge dziine maitiro ekugashira. Ichi chingangodaro chiri chakakosha chinhu chinokurudzira kutaurirana nenhengo dzakasiyana dzechikwata.
Maitiro ekugashira anofanirwa kunyorwa panguva imwechete iyo nyaya yemushandisi inogadzirwa uye inofanirwa kuiswa mukati memuviri wenyaya. Maitiro ese ekugashira anofanirwa kuyedzwa.
Imwe neimwe Yekugamuchira Criteria inofanirwa kuve neyakaverengeka Yekutambira Miedzo yakapihwa sezviitiko zvakanyorwa muGherkin fomati, i.e.
Nyaya Dzemusangano / Sprint Kuronga
Mumusangano wega wega wenyaya, munhu wese ari muchikwata anodzidza nezvehuwandu hwenyaya kuitira kuti vanogadzira uye QA vazive kukura kwebasa. Wese munhu anofanirwa kuve nekunzwisisa kumwechete nezve izvo nyaya iri.
Vagadziri vanofanirwa kuve nekunzwisisa kwakanaka kwehunyanzvi ruzivo rwune chekuita nekuburitsa nyaya, uye QA inofanirwa kuziva kuti nyaya ichaedzwa sei uye kana paine zvimhingamupinyi zvekuyedza ngano.
Mumisangano yenyaya, PO, BA, Dev, uye QA inofanirwa kuve inobatanidzwa.
Mamiriro ezvinhu (anoshanda, asingabvumirwe uye emipendero makesi) anofanirwa kufungidzirwa nezve (QA inogona kuwedzera kukosha kukuru pano nekufunga zvisingaite nezvenyaya yacho) uye yakanyorwa pasi mune maficha maficha.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti ndiwo mamiriro (kupfuura chero chinhu chipi zvacho) ayo achaburitsa hurema pakuyedza chigadzirwa, saka kuwedzera simba uye nguva inoshandiswa pachinhu ichi, mhedzisiro yakanaka pakupedzisira.
Nekuti kuwanda kwekukanganisa kuri nekuda kwezvisina kujeka uye zvisina kujeka zvinodiwa, chiitiko ichi chinobatsira kudzivirira kuitiswa kwehunhu husina kunaka sezvo munhu wese achifanira kuve nekunzwisisa kwakafanana kwenyaya.
Saizvozvowo, mumisangano yekuronga kwekumhanya, fungidziro dzakapihwa yenyaya dzinofanirwa kusanganisira kuyedza kuyedza futi kwete kungo coding kuedza. QA (manyore uye otomatiki) inofanirawo kunge iripo mumisangano yekumhanyisa kuronga kupa fungidziro yekuyedzwa kwenyaya.
Kana kuvandudza kwatanga, nyowani yekugadzira kodhi uye / kana kuchinjika kune yekodhi kodhi inofanirwa kutsigirwa ne yuniti bvunzo yakanyorwa nevagadziri uye peer-kuongororwa neumwe mugadziri kana ane hunyanzvi SDET.
Chero kupi kuzvipira kukodhi repodhi kunofanirwa kukonzera kuitiswa kweyuniti bvunzo kubva kuCI server. Izvi zvinopa inokurumidza mhinduro mashandiro kune timu yekusimudzira.
Yuniti bvunzo dzinoona kuti iyo system inoshanda padanho rehunyanzvi uye kuti hapana zvikanganiso mune zvine musoro.
Semugadziri, ita kunge usina QA muchikwata kana musangano. Ichokwadi kuti maQAs ane pfungwa dzakasiyana asi iwe unofanirwa kuyedza kusvika paunogona napo.
Iwe unofunga urikuchengetedza nguva nekukurumidza kuenda kune inotevera nyaya, asi muchokwadi, kana chakaremara chikawanikwa uye chikashumwa, zvinotora nguva yakareba kugadzirisa nyaya pane kupedza maminetsi mashoma kuona kuti chimiro chinoshanda nemazvo.
Chero imwe kodhi nyowani uye / kana kugadzirisazve yekodhi kodhi inofanirwa kuve neyakakodzera yuniti bvunzo inozove chikamu cheyuniti regression bvunzo.
Automated Kugamuchirwa Miedzo uye Isiri-inoshanda Kuedzwa
Iwo ano otomatiki ekugamuchirwa bvunzo anosanganisira Yekubatanidza Kuyedza uye Service Kuedza uye UI bvunzo inovavarira kuratidza kuti software inoshanda padanho rinoshanda uye kuti inosangana nezvinodiwa nemushandisi uye zvirevo.
Ongororo dzekuzvigadzirira dzega dzinowanzo nyorwa mumutauro weGherkin uye dzinoitwa uchishandisa chishandiso cheBDD senge cucumber.
Rangarira : Haasi ese miedzo inoda kuve otomatiki!
Nekuti bvunzo idzi dzinowanzoda kutaurirana pamusoro HTTP, dzinofanirwa kuitiswa pachishandiswa chakatumirwa, pane kumhanya sechikamu chechivakwa.
Isiri-inoshanda bvunzo senge Performance uye Kuchengetedzwa bvunzo dzakakosha zvakaenzana nemabvunzo anoshanda, saka zvinofanirwa kuitwa pane imwe neimwe deploy.
Performance Kuedza kunofanirwa kutarisa mashandiro ematanho pane imwe neimwe deploy kuona kuti hapana kudzikisira kwekuita.
Kuchengetedzwa Miedzo inofanirwa kutarisa kwekutanga kwekuchengetedza kusagadzikana kwakatorwa kubva OWASP
Izvo zvakakosha kuti izvi zvinofanirwa kuve zviitwe zvakakwana kuita pamwe nekushomeka kushoma kuti uwane iyo yakawanda kubatsirwa kubva kune otomatiki deployments. Izvi zvinoreva kuti hapafanire kuve nekupokana kwekuyedza bvunzo, bvunzo script nyaya, uye yakaputsika nharaunda.
Kukundikana kunofanirwa kungove nekuda kwekukanganisa kwechokwadi kwekodhi kwete pane zvinyorwa zvegwaro, nekudaro chero bvunzo inokundikana iyo isiri yekukanganisa kwechokwadi inofanirwa kugadziriswa nekukasira kana kubviswa kubva kune iyo otomatiki pakiti, kuti ugone kuwana zvabuda zvinoenderana
Kwete kutarisira kuwana akawanda akaremara. Chinangwa chavo ndechekungopa mhinduro kuti hatina kutyora mashandiro makuru. Panofanirwa kuve neyakawandisa shoma bhaisikopo regression kuyedza.
Smoke pack - Inofanira kunge isingapfuuri gumi nemashanu mins
Iri rongedza rine chete chepamusoro-chinhanho mashandiro kuti uve nechokwadi chekuti iko kugadzikana kwakaringana kuti kuenderere mberi kusimudzira kana kuyedzwa.
Semuenzaniso, kune eCommerce webhusaiti, bvunzo dzakabatanidzwa mupakeji iyi dzinogona kuve:
Akaunti Kugadzira / Akaunti Kupinda
Yakazara regression pack - haifanire kunge ichipfuura 1 awa
Iri rongedza rine yakazara yakazara regadziriso suite yemiyedzo uye ine zvese zvimwe izvo zvisina kuiswa mune yeutsi pack.
Pano, icho chinangwa ndechekutora inokurumidza mhinduro ine hombe seti yemiedzo. Kana mhinduro ichitora inopfuura 1 awa, haina kukurumidza. Chero kudzikisira huwandu hweyedzo uchishandisa nzira mbiri dzekuyedza, gadzira bvunzo mapakeji anoenderana nenjodzi kana kumhanyisa bvunzo zvakafanana.
UAT uye Ongororo Yekuongorora
Iko hakuna chikonzero nei UAT uye kuongorora kwekuongorora kusingakwanise kumhanya zvakafanana neyakajairika yekutambira bvunzo. Mushure mezvose, izvi zvakasiyana zviitiko uye zvinangwa kuwana zvakasiyana nyaya. Chinangwa cheUAT ndechekuona kuti izvo zvakagadziriswa maficha zvinoita bhizinesi pfungwa uye zvinobatsira kune vatengi.
PO (Chigadzirwa Muridzi) inofanirwa kumhanyisa Mushandisi Kugamuchira Miedzo kana Bhizinesi Kugamuchira Miedzo yekusimbisa chigadzirwa chakavakwa ndizvo zvaitarisirwa uye kuti zvinosangana nezvinotarisirwa nemushandisi.
Kuongorora kwekuongorora kunofanirwa kutarisa pazviitiko zvevashandisi uye kunofanira kuwana zvipembenene zvinoshaya otomatiki. Kuongorora kwekuongorora hakufanirwe kuwana tupukanana tudiki, asi kunofanirwa kuwana nyaya dzakavanzika.
Kana zvese zviitiko zvataurwa pamusoro zvapedziswa uye pasina nyaya dzawanikwa, nyaya ndeye Zvaitwa!
Aya ari pamusoro ndedzimwe nhungamiro pane izvo zvinogona kuverengerwa muAgile Test Strategic Gwaro. Zviripachena kuti izvi zvinofanirwa kuve zvinoenderana nezvinodiwa nesangano rako, asi ndinovimba, iyi template ingakubatsire mukugadzira rako reAgile Test Test gwaro.
facebook messenger chat misoro iphone
sony wh-1000xm4 ongororo
Samsung inosanganisira yakagadziridzwa yemakore matatu yeGreen Note 3 mune yayo runyorwa rweBlack Chishanu madhiri
Iyo Samsung Galaxy S6 yakabvamburwa nepakati, uye kutsiva bhatiri rayo haisi yevakapera moyo
Inishuwarenzi yefoni yakakosha here? Sarudzo dzevatakuri vs AppleCare vs Samsung Kudzivirirwa vs SquareTrade
Google inoita kuti ubvise yekupedzisira maminetsi gumi neshanu enhoroondo yekutsvaga nemaviri kudzvanya
Nguva yapera TikTok muU.S.
Tora Apple iPhone 5s ye $ 1 nhasi uye mangwana kubva kuBest Buy
Amazon Alexa ikozvino inogona kubatanidza kune maprinta, heino maitiro